Paartiin Chaayinaa hanqina dubartootaa qabaa laata? - BBC News Afaan Oromoo
Paartiin Chaayinaa hanqina dubartootaa qabaa laata?
Pireezidaant Shii wayita sirna baniinsa walgahii Paartii Kominiistii Chaayinaa 19ffaa irratti haasawaa taasisanitti, hirmaattoota 2,280tu dhagahaa ture. Garuu, isaan keessaa dubartoonni nuusaa gadi dha.
Kunis namoonni tokko tokko paartichi waa'ee walqixummaa dubartootaa cimsee laalaa jiraa kan jedhu akka gaafatan taasiseera.
Gaazexaan Niiwyoork Taayims, dubartummaan 'qoosaadha?'' - Paartiin kominiistii Chaayinaa wayi rakkoo dubartootaa qabaa? jechuun barreesse.
Miseensoota paartichaa miliiyoona 89.4 keessaa dubartoonni miliyoona 23 gadii ykn % 26 dha.
Erga walgahii paartichaa kan dhumaa bara 2012 as, dubartoota 33 qofatu kooree jiddugalaa kan imaammata baasuu keessatti dabalame. Kunis %9 jechuu dha.
Miseensa koree imaammata baasu 25 keessaayis lama qofatu dubartoota ykn %8 qofa.
Goodayyaa suuraa Walgahii paartii Koministii bara kanaa keessaa nuusa qofatu dubartoota dha.
Chaayinaatti dubartoonni siyaasa keessa cabsanii galuuf baayyee itti cima.
Haalli kunis yaada mootummaan walqixxummaa dubartootaaf kenneefi Chaayinaatti qabatamaan dhiira caalaa dubartoonni baay'een yuunivarsiitii galuu isaaniirraa madde.
Kanaafuu, maaltuu duubatti isaan harkiisaa? Dubartoonni yeroo baay'ee paartiitti kan makaman osoo yuunivarsitii jiranu ykn oggummaa saanii cimsachuuf wayita hojjataanitti dha.
''Bara dheeraaf iddoon dubartootaa manaafi bakka nyaanni itti bilcheefamu ilaalchi jedhu jiraatus, isaan garuu hawwii olaanaa hin qaban jechuu miti,'' Yuunivarsiitii Toroontootti Pirofeesara saayinsii siyaasaa kan ta'an Laayneet H Ong ibsaniiru.
''Gaheen hawaasummaa isaanii abbaa warraa, daa'immanii fi akaakayyuuwaniif kuunuunsa taasisuu ta'a," jedhu.
"Namni beekamaan Mao jedhamu yeroo tokko, 'dubartoonni walakkaa samii qabataniiru,' jedhulleen dubartoonni walqixummaan bakka bu'uumsa argachuuf, amma illeen daandii dheeraa deemutu isaan irraa eegama."
Umuriin sooramaa itti bahan gadaanaa ta'unsaas dubartoonni guddina akka hin argannee taasiseera. Wayita amaatti, Chaayinaatti umuriin sooromaa dhiiraaf 60 yoo ta'u kan dubartoota hojii motummaa hojataniif 55 fi dubartoota kaaniif waggaa 50 dha.
Garuu, haalli Chaayinaa keessaa kan hin baramneedha? Waa'een dubartoota Chaayinaa kanneen biyyoota adduunyaatiin gadii?
Miti dhugaatti. Addunyaa gutuutti dubartoonni murtee siyaasaa keessatti dhiibbantaa muraasa qabu.
Miseensota paarlaamaa mana marii UK keessaa dubartoonni %32 qofaa dha. Kunis isa olaanaa dha. Hindiitti %11 yoo ta'an, Jaappaan ammo %9 qofatu miseensa bakka bu'oota uummataati.
Biyyoonni gama Kanaan haala gaariirratti argamanis jiru. Teessoon itti aantootaa 'Chamber of Rwanda' %61 dubartootaan qabame. Yaa'ii biyyaalessaa (Asamblea Nacional) kominiistii Kubaaatti ammo %49 dubartoota.
Karaa biraatiin ammoo, qorannoon yuunivarsiitii Saa'oo Kaarloosiin gaggeeffame akka mul'isetti, Biraaziil keessatti miseensoota paartii mootummaa keessa %33 dubartoota.
Kanaafuu, Chaayinaatti dubartoonni siyaasaaf bakka buufaman gadaanaa ta'u illeen, dhimmichi kan Chaayinaa qofaa miti.
Viidiyoo Yaa'ii Paartii Koministii Chaayinaarraa maal eegna?